Barcelona Oo Camp Nou Ku Dubatay Chelsea +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Barcelona Oo Camp Nou Ku Dubatay Chelsea +SAWIRRO
Kooxa Barcelona ayaa u soo baxday siddeed dhamaadka tartanka UEFA Champions League kadib markii ay Camp Nou ku dubatay kooxda Chelsea. Lionel Messi ayaa markale indhaa caalamka ku xaday laba gool isaga oo Chelsea u diiday in ay wax rajo ah ku yeelato kulankii lugtii labaad ee wareega 16ka kooxood ee UCL.
Lionel Messi ayaa bilawgii ciyaartaba dhaliyay goolka Chelsea xaalada ku sii xumeeyay laakiin waxa uu markale si layaableh caawin ugu sameeyay Ousmane Dembele kaas oo goolkiisii ugu horeeyay ee waayihiisa ciyaareed ee Barcelona kulankan ka dhaliyay laakiin qaybtii danbe Lionel Messi ayaa ciyaarta hurdada u diray kadib markii uu dhaliyay goolkiisa labaad kaas oo ahaa goolkiisii 100 aad ee UCL.
Barcelona ayaa ku biiray kooxaha Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich, Juventus, Sevilla, AS Roma iyo Manchester City kuwaas oo ah siddeeda kooxood ee loo samayn doono isku aadka siddeed dhamaadka UEFA Champions League. Kadib markii ay Sevilla xalay tartankan ka reebtay Man United ayay markale Barca iyaduna ka reebtay Chelsea.
DAQIIQADII 3 AAD Alla Maxay Bilaabasho Fiican U ahayd? Barcelona ayaa isla markiiba heshay goolka ay xaalada xun ugu abuurtay kooxda martida ahayd ee Chelsea waxaana gool deg deg ah Balaugrana u saxiixay Lionel Messi kaas oo aan kooxda Antonio Conte ee Blues siin fursad ay isku habeeyaan wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Barca hogaanka kula wareegtay bilawgii ciyaartaba.
Lionel Messi ayaa isku dayay in uu kubbad la ciyaaro Dembele laakiin kubbada ayaa ku sii dhacday Marcos Alonso iyada oo uu Luis Suarez helay fursada uu Messi kubbada ugaga caawiyay in uu dhaliyo goolka furitaanka wuxuuna goolkani jawiga Camp Nou ka dhigay mid xoog u sii shidmay.
Chelsea ayaa si fiican uga falcelisay goolka looga naxsaday waxayna bilawday in ay gees marto qorshihii ciyaarta ee markii hore u dajisnaa oo ah in ay awooda saarto difaacasho isla markaana ay weeraro deg deg ah goolal ku raadiso waxayna markan bilawday in ay si buuxda kubbada ugu dagaalanto oo ay Barcelona cadaadis saarto.
Inkasta oo ay Chelsea u muuqatay mid aad iyo aad uga fiican sidii ay garoonkeeda Stamford Bridge ku ahayd haddana waxay dhibaato ka haysatay sidii ay ku dhaafi lahayd difaaca Barcelona oo ay ilaa xidigaha khadka dhexe iyo weerarku dib ugu dagayeen difaacasho marka ay Blues kubbada hesho.
DAQIIQADII 20 AAD Barcelona ayaa si layaableh ula timid goolkeeda labaad kadib markii uu Lionel Messi soo burburiyay ciyaartoyda Chelsea ee Christensen iyo Azpilicueta isla markaana uu da’yarka Ousmane Dembele siiyay kubbada uu ku dhaliyay goolkiisii abid ugu horeeyay ee waayihiisa ciyaareed ee Barcelona wuxuuna Dembele ciyaarta ka dhigay 2-0 ay Barcelona hogaanka ciyaarta ku dheeraysatay.
Marka laga yimaado qaabka layaabka leh ee uu Messi u soo dhisay caawinta goolka Dembele, da’yarka ree France ayaa si degan kubbada u maamulay wuxuuna darbo xoogan ku tuuray lugta midig isaga oo goolhaye Courtois iyo Rudiger u diiday in ay wax badbaadin ah sameeyaan.
Luis Suarez iyo Gerard Pique ayaa helay fursado fiican oo ay goolal kale ugu keeni kareen Barcelona laakiin Coutois ayaa labadaba ka joojiyay fursado ay heleen laakiin Chelsea ayaa sii waday in ay raadiso qaabkii ay ku gaadhi lahayd shabaqa Barca.
DAQIIQADII 37 AAD Marcos Alonso ayaa ugu dhawaaday in uu Chelsea u keeno gool aad muhiim ugu noqon lahaa laakiin darbo uu lugta bidix si fiican ugu tuuray ayuu goolhaye Ter Stegen si fiican iskaga joojiyay waxayna ahayd halis aad u fiican.
DAQIIQADII 38 AAD N’Golo Kante ayaa markale ugu dhawaaday in uu dhaliyo goolka ay Chelsea sida wayn u doonaysay laakiin Fabregas oo u muuqday in uu offside ku jiray ayaa Kante ka xumeeyay darbadii uu si toos ah goolka ugu toogan lahaa waxayna kubbadu hor martay goolka Barca.
DAQIIQADII 45 AAD Chelsea ayaa meel halis ah loo dhigay darbo laaga xorta ah waxaana si layaableh u tuuray Marcos Alonso laakiin darbadiisa ayaa birta goolka ku dhacday waxayna ahayd fursad wayn oo ay Blues ciyaarta ugu soo labaan kartay.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 ay Barcelona gacanta sare ku lahayd waxayna Chelsea markale la kulantay natiijo aan caawinayn iyada oo markii horeba u baahnayd in ay ka soo kabsato barbarihii garoonkeeda ay Barcelona kula soo gashay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay markiiba Barcelona heshay fursad gool dhalin cadaa ah iyada oo goolhaye Courtois uu qalad xun sameeyay daqiiqadii 48 aad laakiin kubbada uu Suarez oo dhexda ka soo qabtay ee uu goolka saddexaad ku dhalin lahaa ayuu markale Courtois qaladkiisa dib u saxay wuxuuna badbaadiyay gool cadaan ahaa.
DAQIIQADII 49 AAD Chelsea ayaa heshay fursad cajiib ah iyada oo Hazard iyo Giroud ay kubbadu bixiyeen Marcos Alonso laakiin Dembele ayaa sameeyay taakal layaableh si uu Alonso uga joojiyo in uu dhaliyo goolka ay Blues sida wayn ugu dagaalamaysay.
DAQIIQADII 56 AAD Valverde ayaa ciyaarta ka saaray kabtankiisa Andres Iniesta oo shaqo wayn garoonka ka dhex qabtay balse dhaawac uu ka soo laabtay awgeed aan ciyaarta u dhamaysan karin waxaana kaydka ka soo baxay Paulinho kaas oo xoojin fiican u sameeyay khadka dhexe ee Barca oo dabacsanaan laga dareemay.
DAQIIQADII 61 AAD Sergio Busquets ayuu dhaawac soo gaadhay isaga oo dabaday in la badalo waxaana Valverde qasab ku noqotay in uu kaydka uga yeedho xidiga ay jamaahiirta Barcelona kooxdooda ugu neceb yihiin ee André Gomes.
DAQIIQADII 63 AAD Lionel Messi ayaa markale ka yaabsaday Chelsea isaga oo si sahlan goolhaye Courtois ugu garaacay kubbad uu dhex mariyay labadiisa lugood waxaana markale Messi goolkan ka caawiyay Luis Suarez oo kubbada nolol ku sii hayay intii uu Messi helayay wuxuuna Messi markan ciyaarta ka dhigay 3-0 ay Barca ku dubanayso Chelsea.
Goolkan ayaa ahaa goolkii 100 aad ee uu Lionel Messi ka dhaliyay tartanka UEFA Champions League wuxuuna markale awooday in laba kulan uu Courtois iyo Chelsea uu saddex gool kaga dhaliyay Champions League halka uu sidddeed kulan oo hore aanu Blues wax goolal ah ka soo dhalin.
Goolka saddexaad ee Barcelona ee uu Lionel Messi dhaliyay ayaa musiibo wayn ku sii noqday Chelsea oo rajo ka qabtay in ay soo laaban karto waxayna taasi keentay in Antonio Conte uu daqiiqadii 67 aad uu kaydka uga yeedhay Zappacosta iyo Alvaro Morata wuxuuna ciyaarta ka saaray Moses iyo Giroud.
Sidoo kale Valverde ayaa isla daqiiqadii 67 aad ciyaarta ka saaray Ousmane Dembele wuxuuna kaydka ka keenay Aleix Vidal waxayna Barcelona bilawday in ay ciyaarta si shaki la’aan ah ugu raaxaysato halka Chelsea ay markan daal badan dareemaysay.
DAQIIQADII 82 AAD Conte ayaa ciyaarta ka saaray Eden Hazard oo habeen aad u liita ku qaatay Camp Nou iyada oo doorkiisii hogaamineed aanu waxba ku qaban inkasta oo la arkayay Willian oo shaqada ugu badan Chelsea u qabanayay waxaana kaydka ka soo baxay Pedro Rodriguez oo ay jamaahiirta Barcelona si layaableh u soo dhaweeyeen isla markaana ay u heeseen.
DAQIIQADII 85 AAD Paulinho ayaa ugu dhawaaday in uu dhaliyo goolka afraad ee Barcelona kadib markii uu darbo madax ah ku helay koorne uu Rakatic soo tuuray laakiin goolhaye Courtois ayaa sameeyay badbaadin wayn si uu ceeb kale kooxdiisa uga ilaaliyo.
DAQIIQADII 89 AAD Antonio Rudiger ayaa darbo madax ah oo xoogan ku garaacay Ter Stegen laakiin waxa uu arkay darbadiisa oo birta goolka ka soo booday waxayna ahayd markii labaad ee ay Chelsea birta goolku fursad cadaan ah ka beenisay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-0 ay Barcelona ku soo dubatay Chelsea isla markaana ay kaga cidhibtirtay UEFA Champions League waxayna Baluagrana noqotay kooxdii ugu danbaysay ee dhamaystirtay siddeeda kooxood ee isku arki doona Siddeed dhamaadka UCL.